July 22, 2021 - ApannPyay Media
July 22, 2021 by ApannPyay Media
မိုးသဲထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်ရဖို့တန်းစီရင်း လှူလိုက်တဲ့ထမင်းဗူးကို ထိုင်စားနေတာကိုကြည့်ရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုဒဏ်ကို မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အလူးအလဲခံစားနေရပြီး သုသာန်တွေ၊ဆေးရုံတွေမှာလည်းလူတွေများပြားနေသလို အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ပေးတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေဟာ နေပူမရှောင်၊မိုးရွာမရှောင်တန်းစီနေကြရပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါတွေကြောင့်အခြေခံလူတန်းစားတွေဟာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး ပြည်သူတွေကလည်း ချွေးနည်းစာထဲက တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းပေးနေကြကာ ကူညီဖေးမနေကြပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဧငြိမ်းဖြူကလည်း မနေ့က ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စရာကောင်းသလို အရမ်းလည်းကုသိုလ်ရတဲ့ အလှူလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ရဖို့အတွက် မိုးရွာကြီးထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ တောင်ဒဂုံကပြည်သူတွေကို သူမက ထမင်းဗူး(၁၀၀)ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်ရဖို့ကိုသာ စိတ်ထဲထားပြီး ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့တန်းစီနေကြချိန် အခုလိုလာရောက်လှူဒါန်းတာကြောင့် ပြည်သူတွေက ဝမ်းသာနေကြပြီး လာရောက်လှူဒါန်းတဲ့ထမင်းဗူး(၁၀၀)ဟာလည်း (၅)မိနစ်အတွင်းကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ မိုးရွာကြီးထဲမှာ သူပေးလှူတဲ့ ထမင်းဗူးလေးတွေကို စားနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကိုကြည့်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း ဧငြိမ်းဖြူက ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် … Read more
ယနေ့မနက်ပိုင်းက အင်းစိန်ထောင် ဆူပူမှုဖြစ်ပွား ယနေ့ (၂၃.၇.၂၀၂၁) မနက် ၈ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်းစိန် (ဗဟို) အကျဉ်းထောင်တွင် ဆူပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ကနဦး သတင်းရရှိသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ NHP News မှ အကျဉ်းဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းရာ အဆက်အသွယ်မရရှိသေးသော်လည်း ယင်းဆူပူမှုသည် နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားသည်ဟု သိရသည်။ အင်းစိန်ထောင်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက *န စ က မှအမှုရုပ်သိမ်းပေးသူများကို ယနေ့ပြန်လွှတ်ပေးရန်ရှိသည့်အတွက် လွတ်မြောက်သူများစာရင်းတွင် မပါဝင်သော ပုဒ်မ – ၅၀၅ စီးရီးဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ၏ အဆောင်ဘက်က မကျေနပ်၍ ယခုလို ဆူပူမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် * ဟု ပြောဆိုသည်။ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့်ဖမ်းဆီးခံထားရသူ မိသားစုများဘက်ကမူ န စ က … Read more
အိမ်မှာ အသက် (၆၀) ကျော် လူကြီးမိဘတွေရှိရင် ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပေးပါ စာနာ နားလည်ပေးပါ အသက် ၆၀ ကျော်လာတဲ့အခါ….. လူကြီးတွေ ဦးနှောက်က စကျုံ့လာပြီလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြတယ်.. အသက် ၆ဝကျော်မိဘတွေ ရှိလာတဲ့အခါကျမ တို့ အများကြီးနားလည်ပေးရမယ်စိတ်ရှည်ပေးရမယ်.. အာရုံကြော အားလုံးကျုံ့လာတဲ့အခါထိန်းချုပ်ခြင်းတွေနည်းလာပြီ စကားပွစိ ပွစိ ပြောလာကြမယ်ကိုယ့် မသန်စွမ်းဘူးထင်မှာစိုးလို့အိမ်ရှိသမျှအလုပ် လိုက်လုပ်လိမ့်မယ်။ အဲ့ခါ နောက်ကပြန်လိုက်လုပ်တဲ့ သားသမီးတွေက ငြူစူလာတဲ့အခါ မိဘတွေစိတ်က ကလေးလိုပြန်ဖြစ်လာပြီး ဝမ်းနည်းလာမယ်။ အထီးကနွလြာမယြ မပှောရဲမဆိုရဲဖှဈလာကှတယြ။တဈကယတြော့ အဲ့ခွိနလြူကှီးလိုလညြး လေးစားပှီးကလးလြို သဘောထားပေးရမှာပါ တစ်ခုခု ဝယ်ပေးတဲ့ အခါတိုင်းအဖေ တို့ အမေ တို့မှာရှိတယ်မလိုဘူးအမြဲ ငြင်းတတ်လာမယ် ဒါဟာ အပို မကုန်စေချင်လို့ပါတစ်ကယ်တော့ ကျေနပ် ဝမ်းသာနေတာ..အသက်ကြီးပြီ ဘုရားတရားပဲ လုပ်ပါလားလို့ တိုက်တွန်းလို့မရပါဘူး … Read more
ကိုရီးယားက ဆရာဝန် ရှင်းပြပေးတဲ့ အောက်စီဂျင် သန့်သန့် အရေးပေါ် ရှုနည်းပါ အရေးပေါ် လိုအပ်တဲ့ လူတွေအတွက် စေတနာနဲ့ ပြောပြပေးတာပါ။ ကျွန်မကို ကိုရီးယားက ဆရာဝန် ရှင်းပြပေးတဲ့ အောက်စီဂျင် သန့်သန့် အရေးပေါ် ရှုနည်းပါ။ အိုး ရှိပြီး ပိုက်၊ ခေါင်း အဆင်မပြေသူများ လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက် ။ ရေခွက်ထဲက ရေကို အပြည့် မထည့်ပဲ တစ််ဝက်လောက်ပဲ ထည့်ရပါမယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာ မပြောမိလို့ပါ။ အားလုံး ဘေးကင်းကြပါစေ။ crid chan mya mya thaw ကိုရီးယားက ဆရာဝန် ရှင်းပြပေးတဲ့ အောက်စီဂျင် သန့်သန့် အရေးပေါ် ရှုနည်းပါ အရေးပေါ် လိုအပ်တဲ့ လူတွေအတွက် စေတနာနဲ့ … Read more
5 years anniversary ပြည့်တဲ့အမှတ်တရနေ့လေးမှာ စာသင်ကျောင်းလေးအတွက် သူ့ရဲ့ရွှေဆွဲကြိုးလေးကို ရောင်းပီးလှူလိုက်တဲ့ မေဦး
5 years anniversary ပြည့်တဲ့အမှတ်တရနေ့လေးမှာ စာသင်ကျောင်းလေးအတွက် သူ့ရဲ့ရွှေဆွဲကြိုးလေးကိုရောင်းပီး လှူလိုက်တဲ့ မေဦး ကိုယ်အဆင်မပြေခက်ခဲပေမယ့် မေဦးတို့ထက်အဆင်မပြေခက်ခဲတဲ့ခလေးတွေရဲ့ ကျောင်းလေး ဘေးအကာကာဖို့အတွက်လေးစားပြီးချစ်ရတဲ့သူတွေစီက လက်ဆောင်ရခဲ့ ရွှေဆွဲကြိုးလေးကိုရောင်းပြီး5years anniversary နဲ့ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ အမှတ်တစ်ရလှူဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ကျောင်းလေးကတော်တော်မပြည့်စုံပေမယ့်ဒီမှာရှိတဲ့ ဆရာဆရာမတွေရဲ့ မေတ္တာကတော့ ပြီးပြည့်စုံလွန်းပါတယ် ခလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဘဝမှာ မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စည်းပေးချင်တဲ့ စိတ်က အရင်ထက်ပိုပြီးဖြစ်မိတယ် မေဦးတို့ကို မျှော်လင့်ခြင်းမရှိ ဖြူစင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့မိသားစုလို စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ကရင်လူမျိုးတွေကို အရင်ထက်အရမ်းလည်းပိုချစ်မိတယ် LoveKaren အားလုံးအေးဆေးဖြစ်သွားတဲ့တစ်နေ့ကြရင်တော့ February2ရက်နေ့ မတရားဝရမ်းထုတ်တဲ့နေ့ကစပြီး ယနေ့ထိကြုံခဲ့ရတဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးလမ်းအကြောင်း ရင်ဖွင့်ချင်ပါသေးတယ်…….credit – May Oo5years anniversary ျပည့္တဲ့အမွတ္တရေန႔ေလးမွာ … Read more
မုဒုံ နှီးပဒေါကားလမ်း ရေကျော်ပြီး ကားအစီး ၁၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေသဖြင့် ခရီးသွားလာသူများ လမ်းခရီးစုံစမ်းပြီးမှ သွားလာကြပါရန်
မုဒုံ နှီးပဒေါကားလမ်း ရေကျော်ပြီး ကားအစီး ၁၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေသဖြင့် ခရီးသွားလာသူများ လမ်းခရီးစုံစမ်းပြီးမှ သွားလာကြပါရန် မွန်ပြည်နယ် ၊ မုဒုံမြို့နယ် နှီးပဒေါကျေးရွာအနီးက သံဖြူဇရပ် – မုဒုံကားလမ်း ရေ ကျော်နေပြီး ကားအစီး ၁၀၀ ကျော် ပိတ်မိနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက သံလွင်တိုင်းမ်ကို ပြောပါတယ်။ သံဖြူဇရပ် – မုဒုံကားလမ်းဟာ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီလောက်ကတည်းက ရေကျော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ညနေ ၅ နာရီအချိန်ထိ ရေ ကျသွားဆင်းမရှိသေးပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကားအစီး ၁၀၀ လောက်ပိတ်မိနေတယ်၊ မိုး ဒီအတိုင်း ဆက်ရွာနေမယ်ဆိုရင် ဖြတ်လို့ ရဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူး”လို့ ဒေသခံ တစ်ဦး ဆိုပါတယ်။ … Read more
ဆေးရုံသို့ အောက်စီဂျင်အတွက်အလှူငွေအပြင် ကြက်ဥနဲ့ နင်္ဂါးမောက်သီးတွေကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
မလှိုင်မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ အောက်စီဂျင်အတွက်အလှူငွေအပြင် ကြက်ဥနဲ့ နင်္ဂါးမောက်သီးတွေကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေး ကတော့အကတွေကပြီးလူမှု ကွန်ယက် ဆယ်လီ ဖြစ်လာရာကနေ ဟာသ ဗွီဒီယိုတွေရိုက်ရင်း ပရိတ် သတ် များရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဆယ်လီ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဖြူဖြူထွေးကတော့ သူမကလေးဘဝကနေ ကျောင်းကပွဲတစ်ခုမှာစိတ်ပြေ လက်ပျောက်ကရင်းကနေ လူအများ ဝေဖန် ပြောဆိုခံခဲ့ရပါတယ်၊သူမဟာ ဇွဲမ လျော့ပဲ ကြိုးစားခဲ့ တာ ကြောင့် အောင် မြင်တဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်လာပါ တယ်။ ဖြူဖြူထွေးက တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ အမှန်တရားဘက်က ပါဝင် ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် လဲ လမ်းထွက် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာခနတာ ပါဝင်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဝေဖန် ပြောဆို ခံခဲ့ … Read more
အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုကိုင်တွယ်သုံးစွဲရင် ဂရုစိုက်ကြဖို့ဒီVIDEOလေးက သက်သေပြနေ
အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုကိုင်တွယ်သုံးစွဲရင် ဂရုစိုက်ကြဖို့ဒီVIDEOလေးက သက်သေပြနေ အောက်ဆီဂျင်အိုးက ရော့ကတ် ဒုံးကျည်လို အန္တရယ် ရှိပါတယ်အောက်ဆီဂျင် စလင်ဒါအိုးများ ကိုင်တွယ်ကြရာမှာ သတိထားကြပါ အဆင်မသင့်ရင် ရော့ကတ် ဒုံးကျည် လို အုတ်နံရံကို ဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့အထိ အားပြင်းထန်ပါတယ် အောက်မှာ ရေးသားထားသကဲ့သို့ လိုက်နာကြပါ အောက်ဆီဂျင်အိုး အသုံးပြုသူများအတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များမီးလောင်ခြင်းကို အားပေးပါတယ်။ မီးဖို၊ ဖယောင်တိုင်မီး၊ ဆေးလိပ်မီး၊ မီးမှန်သမျှနဲ့ ဝေးရာမှာထားရပါမယ် ဆီနဲ့ထိရင် ပေါက်ကွဲတတ်ပါတယ်။ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ စားဆီ၊ ခေါင်းလိမ်းဆီ၊ ဆီမှန်သမျှနှင့် လုံးဝမထိမိအောင်ထားရပါမယ် လှည့်တဲ့ဝှီးဘား ကြပ်နေရင်တောင် ဆီစွတ်ပြီး မဖွင့်ရပါဘူး လေဖြည့်ထားတဲ့အိုးဟာ အတွင်းဖိအား 1800psi ရှိပါတယ်။ ထုရိုက်ခြင်း၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပစ်ချခြင်းမျိုး ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ် လဲကျခြင်းမဖြစ်အောင် ခိုင်မာတဲ့ တစ်ခုခုမှာ ချည်နှောင်ထားရပါမယ်။ radiation မဖြစ်တဲ့အတွက် … Read more
ကျန်းမာရေးအတွက်သတိပြုသင့်သည့် ရေချိုးခြင်းနှင့်ရေချိုးသင့်သည့်အချိန်များ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရေချိုးလျှင်သတိပြုရမည့်အချက်များစွာရှိတာမို့ယခုလိုတုတ်ကွေး ဖျာနာရောဂါနှင့်ကိုဗစ် ရောဂါပျောက်ကာစအချိန်များမှာပို၍သတိထားသင့်တဲ့အတွက်ပြောပြဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မိတ်ဆွေများခင်ဗျာရေချိုးသည့်အခါမှာဦးခေါင်းကနေရေစတင်ပြီးလောင်းချိုးမျိုးဟာလေဖြတ်တတ်တဲ့အတွက်ဦးခေါင်းမှစ၍ရေလောင်ချိုးတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့စတင်သတိပေးလိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာသွေးနွေးသတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကကိုယ်က အပူချိန်အလျှင်အမြန်ထိန်းညှိနေရသောကြောင့်ခေါင်းကိုရေလောင်းစဉ်ခေါင်းအေးသွားတဲ့အတွက်အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်က သွေးတွေကခေါင်းကိုအလျှင်အမြန်လာကြတာကြောင့်ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်လွယ်သွားပြီးလေဖြတ်ကာလိမ့်ကျသွားတတ်ပါတယ် ထို့ကြောင့်ရေချိုးတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကနေစတင်ရေလောင်းပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းအပေါ်ပိုင်းကိုဆက်လောင်းချိုးကြပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့် သွေးတိုးရောဂါရှိသူသွေးတွင်းကိုလက်ထရောမြင့်တက်သူနဲ့ဦးခေါင်းတခြမ်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရသူတွေဟာယခုရေချိုးနည်းကိုအထူးလိုက်နာသင့်ပါတယ် မိတ်ဆွေများအားလုံးရေချိုးတဲ့အခါမှာမယခြေထောက်ကိုအရင်ရေလောင်းကာတဖြေးဖြေး ဒူး ပေါင်း ခါး လောင်းပြီးမှတကိုယ်လုံးရေချိုးလိုက်ပါခင်ဗျာရေကို အဆင့်ဆင့် လောင်းနေတုံး ပါးစပ်ထဲမှာရေငုံထားမယ်ဆိုလျှင်ကိုယ်ခန္ဓာကို ရေလောင်းလို့ထွက်လာတဲ့အပူခိုးတွေမျက်စိကိုမရောက်အောင်အကာအကွယ်ပြုပေးနိုင်ပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆင့်ဆင့် ရေလောင်းစဉ်ခြေထောက်ကိုရေလောင်းနေတုန်းချမ်းစိမ့်စိမ့် ဖြစ်လာရင် ရေမချိုးပါနဲ့ ရေချိုးရင် ဖျားတယ်ဆိုတာကအပူရှိလို့အပူငုတ် အပူရှပ်ချင်တာပါ အထူးသတိပေးလိုတာကအပူထဲမှလာပြီးချက်ခြင်း ရေမချိုးပါနဲ့ ထမင်းစားပြီးလျှင်လည်းရေမချိုးပါနဲ့ရေမချိုးခင် ရေ ဝ အောင်သောက်ပါ ရေချိုးပြီးရင်ရေကိုစင်အောင်သုတ်ပြီးရေနွေးသောက်ပါရေချိုးခြင်းဟာမကောင်းကျိုးရှိသလိုရေချိုးလို့ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးများလည်းရှိပါတယ် ဆီးချိုရောဂါရှိသူ တစ်ယောက်ဟာနာရီဝက်ကြာရေချိုးခြင်းကြောင့်သကြားဓာတ်(၁၃)%လျော့နည်းသွားနိုင်ပြီးရေနွေး(၃၂ . ၃၅)ဒီဂရီကို ချိုးရင် အရေပြားကအပေါက်လေးတွေကိုပွင့်စေပြီးအဆိပ်အတောက်တွေထွက်သွားစေသောကြောင့်ကြွက်သားနာတာတွေအသက်သာပြီးအူတွေ ပို အလုပ် လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် (၁၈)မိနစ် (၂၀)မိနစ်ကြာအောင်ရေချိုးပါကခန္ဓာကိုယ်ကအပူများထွက်သွားစေနိုင်ပြီးရေနွေး (၁၂ . ၁၈)ဒီဂရီကိုချိုးရင် စိတ်ဖိအားကျစေမယ် သွေးကြောလေးတွေကို ကျဉ်းစေသလိုသကြားဓာတ်လည်းတက်စေပါလိမ့်မယ် အကယ်၍မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်ပြင် ထ … Read more
တစ်နေ့စာ ချက်စားဖို့ မရှိရင် ကျွန်တော်ဆီ ဖုန်းဆက်ပါဆိုတဲ့ လူငယ်လေး
တစ်နေ့စာ ချက်စားဖို့ မရှိရင် ကျွန်တော်ဆီ ဖုန်းဆက်ပါဆိုတဲ့ လူငယ်လေး နေ့ဖို့ညစာ အခက်ခဲ ဖြစ်သော မိသားစုများ တကယ် မရှိတဲ့သူတွေ အတွက်သာ ရည် ရွယ်ပါတယ် ။ နေ့ဖို့ညစာ အခက်ခဲ ဖြစ်သော မိသားစုများ အဖေမေ အလုပ်ကပြန်လာမှဆန်ဆီ ဝယ်စားရသောမိသားစုများ တကယ်ကိုထမင်းတစ်နပ်စာအတွက် အခက်ခဲဖြစ်နေသောမိသားစုဝင်များအတွက် ရည် ရွယ်ပြီး အခြေ ခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်တဲ့ ဆန် ဆီ ဆား ငပိ များကိုfood box တွင် ထည့်ထားခဲ့ပါပြီ လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလကို အဓိက ထားပြီး food boxထားပေးတာပါ အကောင်းဆိုးကတော့ ဒွန်တွဲနေစမြဲပါပဲလူတိုင်းမှာ လောဘဆိုတာ ရှိကြပါတယ် လိုအပ်လို့လာယူတဲ့သူတွေကိုလဲ တစ်ဦးလျှင် ဆန်တစ်ထုပ်ဆီ တစ်ဗူး သာယူကြဖို့ food box နားကနေပြီးဦးလေးတစ်ယောက်ကလဲ … Read more